Shirkadda Somtel Oo Lasheegay In Ay Taawar Kadul Taagtay Xafiiska Haayadda Duulista Iyo Madaarrada Hargeysa Iyo Cabasho Kataagan..[Akhriso + Sawir]
Wednesday November 07, 2018 - 13:40:07 in Wararka
Khatarta Caafimaad ee ay leeyihiin Taawarada Shirkadaha Telefoonada, Daraasado laga sameeyey sida ay u saameeyaan biraha taawarada telefanku caafimaadka bulshada ayaa waxaa lagu sheegay in dhibaatadiisu kaa soo gaadhi karto masaafo 45 mayl
ah, bal ka waran qofka ku dhaw ee intaas uga dhaw xaalkiisa? Ka waran ka hoos fadhiya guri dhakada sare laga saaray birta taawarka ah, in ka badan maalintii 6 saacadood oo xidhiidh ah? Muran kama taagna inay xaaladiisu qofkaas tahay allow sahal, xanuuno badana ku dhici karaan alle ha ka hayee, kuwa ugu khatarsan ee laga dhaxlo biraha taawada telefanka waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
1. Madax-xanuun joogto ah (Headaches)
2. Maskaxda qaybta xasuusta oo yaraata (Memory Loss)
3. Ubadka oo ka qubta haweenka iyo Ilmaha oo ku dhasha iyadoon mudadiisii buuxsamin (Birth detect)
4. Madhalaysnimada oo ay caawiso ka dib yaraansho ku imanaaya awoodaha alle galiyey ruuxa qaybtiisa jinsiga sida ugxanta haweenka iyo spermka raga (low sperm count).
5. Xanuunka kansarka oo ay qab libaax ka qaadato (Cancer)
6. Wadno xanuun joogto ah iyo qofka oo mar walba ku jira xaalad aan deganayn (heart pain and Stress full).
Iyadoo laga wada warqabo khatarta iyo dhibaatada ay leeyihiin taawaradu, maxaa kalifay in xafiis shaqaale ka hawlgalaan dusha laga saaro? Dhawaan waxaa xafiiska Hay’ada duulista iyo madaarada dalka laga dul bineeyey taawarada khatarta badan ee ay leedahay Shirkada isgaadhsiinta ee SOMTEL, sida aan xogta ku hayo arinkan waxaa ka danbeeyey agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee Hay’ada duulista iyo madaarada, kana dhaadhiciyey Maareeyaha guud ee Hay’ada.
Ma garankarno faa’idada uu ku qabi karo qaranku birtan la saaray aqalka dawlada?, kaliya waxaa laga heli karaa waa dheef yar oo ah in laga kireeyey waa haddiiba ay jirtee, mise masuuliyiintan kaliya waxay ku qanceen mabsuudna ku yihiin dheemaalka shirkadaha isgaadhsiintu wasaaradaha iyo xarumahada dawlada ku sasabataan, iyagoo ka leh dano shirkadeed oo aan hunguri dhaafsiisnay.
Hore ayey soomaalidu ugu maahmaahday” Jidiin wax ka weyn la mariyaa wuu dilaacaa”, Agaasime Cismaan Maxamed Cabdi(Mr. Koofiya) waa ruug cadaa ku dhex tababartay Hay’ada Duulista iyo madaarada, xariifna ku ah wax isdaba marinta iyo lunsiga hantida, wuxuu soo qabtay xilal kale duwan intii ay wasaarada duulista ahayd, wuxuu soo noqday maamule Madaar, mudo dheer imika waa shakhsiga gacanta ku haya hantida maaliyadeed ee ay leedahay Hay’ada Duulistu (Dhakhliga iyo Kharashkaba), waa shakhsiga go’aamiya kharashaadka Hay’ada duulista, Maareeye dahsoon oo ka faa’idaystay xilka uu hayo, waxaa igu maqaalo ah waxuu ugu neceb yahay erayo uu maqlo ama lagu yidhaahdo "Gaadhigaasi wuxuu u baahan yahay in geerashka lageeyo, hebel wuxuu rabaa kharashkii gaadhiga lagu hagaajiyey, hebel wuxuu doonayaa inaad shidaal u qortid” bal waa yaabe lacagta qaranka ma maamul oo hantida dawlada ku dayactir baa lagu yidhi mise ilaali oo dheefso kaligaa? Ma jirto aqoon sii durugsan uu u leeyaha nidaamka xisaabaadka iyo maamulka hantida dawlada, haddii laga tagi waayo wuxuu yaqaan inta sariflayaashu xisaabta ku fadhiisiyaan maadaama uu hore u ahaan jiray sarifle. Shakhsigani ma jecla talooyinka waxtarka u leh hawlaha qaranka ee uu gacanta ku hayo, haddii aanay ku jirin dheef korodhsi aduun oo kasoo galaaya.
Waxba kusii tiigaali maayo shakhsiyadiisa, ee aan iswaydiino waa intee karashka kasoo galay cismaan taawarka cusub ee shirkada SOMTEL iyo khatarta caafimaad ee uu ku keeni karo shaqaalaha subax kasta usoo shaqo taga xarunta dawlada? Haddaba waa yaabe sidee buu Maareeye Cabdi Maxamed Rodol uga aqbalay in shirkad gaar loo leeyahay ay taawar ku rakibato xafiiskiisa dushiisa, isagoo ka masuul ahaa soo celintii gegida baabuurta la dhigto ee madaarka oo markii hore gacanta dawlada ka maqnaa, isagoo dedaal uu soo sameeyey awgii meesha kasaaray shirkadii SRM ee madaarka ka hawl geli jirtay amniga madaarkana gacanta ku haysay.
Maareeye Rodol oo ah ruux aan lagu xaman qabyaalad, kale faquuq iyo nin jeclaysi intuu xilka hayey waa maxay waxa ka weyn caafimadkiisa ee uu dhaafsaday shirkada SOMTEL? Haddii shirkada SOMTEL loo ogolaaday inay kiraysato xafiiskaaga dushiisa, wax u diidayaa ma jiraan shirkadaha kalena laga kiraayo si ay taawaro uga binaystaan. Se waxaan muran ku taagnayn in aad masuul ka noqon doontid khatar kasta oo ka dhalata halista Taawada Shirkada SOMTEL ee xafiiskaaga la saaray.
Waxaan kusoo gebigebaynayaa "Cismaanow nin agoon qalin ku xaday, been kuma macaasho”.
"Nin kastoo dakano galay
Qoluu dabada geliyoo
Danbi dhacay masuul ma leh”….. Abwaan Gaarrye
W/Q: Nuur Cabdirisaaq Muxumed